Jaamac Xasan Salaad “Adeeroow nin rafanaaya aniga xil igama qaadi karo..” (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Jaamac Xasan Salaad “Adeeroow nin rafanaaya aniga xil igama qaadi karo..” (DHAGEYSO)
Jaamac Xasan Salaad oo ah wasiirkii arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Galmudug oo dhawaan xil ka qaadis uu ku sameeyay madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa jawaab kulul ka bixiyay xil ka qaadistaasi lagu sameeyay.
Xil ka qaadista lagu sameeyay wasiirka ayaa sida la sheegay timid kadib markii lagu eedeeyay inuu sameeyay amar diido iyo xil gudasho la’aan, waxaana wareegto uu soo saaray madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed xilkii looga qaaday wasiirkaas.
Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa xilkaasi u magacaabay nin lagu magacaabo Maxamed Xayir Nuur.
Jaamac Xasan Salaad oo ah wasiirkii xilka laga qaaday oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in C/kariin Xuseen Guuleed uusan ku sameyn karin xil ka qaadis, maadaama sida uu sheegay aanu wax xil ah ka haynin maamulka Galmudug.
Wuxuu sheegay in baarlamaanka Galmudug ay xilkii ka qaadeen islamarkaana aanu awoood u lahayn inuu xil ka qaadis ku sameeyo.
“Adeeroow nin rafanaaya aniga xil igama qaadi karo, C/kariin Xuseen Guuleed isagiibaa xilka laga qaaday, mana ahan madaxweyne haatan xil ka haaya Galmudug, waxaana u arkaa xil ka qaadistii uu igu sameeyay mid aanay sharci ahayn, waa nin guri isku soo xiray aanay talo gacan ku hayn” Sidaasi waxaa yiri Jaamac Xasan Salaad.
Dhinac kale, warar hoose ay heshay warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegeysa in wasiirka xilka laga qaaday uu ka mid ahaa dhowr wasiir oo ku sugan magaalada Muqdisho ay shaaciyeen inay soo dhaweynayaan xil ka qaadistii qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ay ku sameeyeen madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed.
Ugu dambeyntii, arrintaasi ayaa la sheegayaa inay soo dadajisay xilka qaadista uu madaxweyne Guuleed ku sameeyay wasiirka arimaha gudaha iyo dowladdaha hoose ee maamulka Galmudug Jaamac Xasan Salaad.